နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးမှတဆင့် မဲဆန္ဒရှင်များအား ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံများသို့ သွားရောက်မဲထည့်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးခဲ့ - YOYARLAY Digital Media and News
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ – လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ၊ အထူးသဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးရမည့် လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်များအား ပါဝင်မဲပေးကြရန် အားပေးလှုံ့ဆော်သည့်အနေဖြင့် International Foundation for Electoral Systems (IFES) မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့ထိပ်တန်း ဂီတအနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီး Mizzima နှင့် DVB Facebook စာမျက်နှာများ၊ First Time Youth Voters For 2020 Facebook စာမျက်နှာ အပါအဝင် Tune Up To Vote! YouTube ချန်နယ်တွင် တပြိုင်နက် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သော ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ပြည်သူများက ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါသည်။
ဘန်နီဖြိုး၊ မေလသံစဉ်နှင့် အုပ်စိုးခန့်၊ ပန်းရောင်ခြယ်၊ Eternal Gosh ၊ J-Fire ၊ T ZIN နှင့် FUN BAND အစရှိသည့် ထိပ်တန်း ပြည်တွင်းအနုပညာရှင်များ၏ ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားသော သီဆိုဖျော်ဖြေမှုများစွာကို မပြသမီ အဖွင့်အစီအစဉ်အဖြစ် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား (၈) မျိုးဖြင့် စုပေါင်း သီဆိုထားသည့် ‘Every Human Is The Same’ သီချင်းဖြင့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးကို စတင်ခဲ့သည်။ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲကြီး၏ အကဲဖြတ်ဒိုင်များဖြစ်ကြသော ဥက္ကဦးသာ၊ အားတီ၊ မိစန္ဒီနှင့် အနိုင်ရရှိသူများဖြစ်ကြသော Mosses ၊ ဇေယျာပိုင်နှင့် June Hpaan တို့မှလည်း ပါဝင် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
တေးသီချင်းဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတွင် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း လူငယ်များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကို အလေးအနက်ထား တင်ဆက်ပြသနိုင်ရန်နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားနေသော ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး လမ်းညွှန်ချက်များအပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှ သတင်းတုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအမှားများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို အထူး ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားသော ဗီဒီယိုများအား ထည့်သွင်း ပြသခဲ့ပါသည်။
Mizzima TV တွင် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီး ပထမအကြိမ် ထုတ်လွှင့်ပြသမှုအား မကြည့်ရှုလိုက်ရသူများအတွက် DVB တီဗီတွင် အပိုင်း (၃) ပိုင်းခွဲ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် ပထမပိုင်းအား ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသသွားပါမည်။ အပိုင်း (၂) အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ညနေ ၇ နာရီခွဲတွင်လည်းကောင်း အပိုင်း (၃) အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ ညနေ ၇ နာရီခွဲတွင်လည်းကောင်း ပြန်လည် ပြသသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ အစ၊အဆုံးအား First Time Youth Voters For 2020 Facebook စာမျက်နှာနှင့် Tune Up To Vote! YouTube ချန်နယ်တို့တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ကနဦးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်၏ အကျဉ်းချုပ်
‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ကနဦးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်ကို အသိပညာပေး ဖျော်ဖြေရေးပုံစံဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့အတွင်း စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲကြီး၊ ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးနှင့် အခန်းဆက် အွန်လိုင်း စကားဝိုင်းများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကနဦးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်သည် လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးရမည့် မဲဆန္ဒရှင်များအား ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် IFES မှ ဦးဆောင်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) နှင့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ လူမှုရပ်ဝန်း ပြောင်းလဲတိုးတက်ရေး ဖန်တီးမှု အေဂျင်စီဖြစ်သော Love Frankie မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ” ဂီတဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲကြီး
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ” ဂီတဖန်တီးမှု ပြိုင်ပွဲကြီးမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း လူငယ်များ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လာကြစေရန် တိုက်တွန်း အားပေးနိုင်သည့် သီချင်းများ ရေးစပ်ဖန်တီး၍ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ နေရာအနှံ့အပြားမှ ရာပေါင်းများစွာသော ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းများ ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ အကဲဖြတ်ဒိုင်များဖြစ်ကြသော ဥက္ကဦးသာ၊ အားတီနှင့် မိစန္ဒီတို့က ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းများအတွင်း လူငယ်များအား အားပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်း၊ သီချင်းရေးသား ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တင်ဆက်မှုစွမ်းရည်များအပေါ် မူတည်၍ ဆန်ခါတင် (၁၀) ဦးအား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရွေးချယ်ခံရသည့် ဆန်ခါတင် (၁၀) ဦး၏ ဗီဒီယိုများကို First Time Youth Voters For 2020 Facebook စာမျက်နှာတွင် တင်ခဲ့ပြီး အများပြည်သူမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း မဲပေးခဲ့ကြသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင် သီချင်းများအတွက် အများပြည်သူမှ စုစုပေါင်း (၅၄,၁၀၅) မဲ ထည့်ဝင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိသူများအား ရွေးချယ်ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည်။ အများပြည်သူပေးသည့် မဲများမှ အမှတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အနိုင်ရရှိသူ (၃) ဦးမှာ – Mosses ၊ ဇေယျာပိုင် နှင့် June Hpaan တို့ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သီချင်းများကို ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးတွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အနိုင်ရရှိသူများအား မူရင်းသီချင်း အသစ်တစ်ပုဒ် ဖန်တီးနိုင်ရန် ဂီတပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဒီသီချင်းသစ်ကို ပညာရှင်အဆင့် အသံသွင်း၊ တည်းဖြတ်ကာ ဂီတဗီဒီယို (Music Video) တစ်ခု ဖန်တီးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကဲဖြတ်ဒိုင်များ ရွေးချယ်ထားသည့် အနိုင်ရရှိသူ (၂) ဦးဖြစ်သော မြတ်ဦးနှင့် Samuel ၊ ချမ်းအောင်နှင့် ချမ်းဇမီရှိုင်း တို့ကိုလည်း ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးစီ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
Tea Talks နှင့် အထူးပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုများ ပါဝင်ခဲ့သည့် ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများ
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဂီတဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပနေသည့် ကာလတလျှောက် အပိုင်း (၁၂) ပိုင်း ပါဝင်သော အခန်းဆက် စကားဝိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုကို First Time Youth Voters For 2020 Facebook စာမျက်နှာ မှတဆင့် တင်ဆက်ပြသခဲ့ပါသည်။ အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများတွင် ပြည်တွင်းရှိ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များမှ မဲပေးသူများ သိသင့်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် အသိပညာပေးစည်းရုံးရေး အကြောင်းအရာများကို ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာများအတွင်း မဲစာရင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် တရားဝင် သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေနိုင်သည့် နေရာများ၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း သိထားသင့်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နားလည်တတ်မြောက်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့တွင် ပါဝင်ရန် အကြံပြုချက်များ စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများအတွင်း မြန်မာလူငယ်များ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက် နားလည်ပြီး အသုံးချတတ်စေရန် အသိပညာပေးနေသည့် လက်ဖက်ရည်စကားဝိုင်း (Tea Talks) နှင့် special collaboration ပြုလုပ်ထားသော အပိုင်းများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လက်ဖက်ရည်စကားဝိုင်းများကို ပြည်တွင်း ထိပ်တန်း CSOs အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော MIDO ၊ ဆိုက်ဘာဘေးကင်း၊ Geek Girls တို့ပူးပေါင်းပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အဆိုတော် အားတီ အပါအဝင် နာမည်ကြီး influencers ပါဝင်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
တစ်နိုင်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပြုလုပ်မည့် ‘နိုးကြားတက်ကြွ ၂၀၂၀ မှာ မဲပေးကြ’ ဂီတဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးနှင့် အစီအစဉ်များအကြောင်း သိရှိလိုပါက www.facebook.com/FirstTimeYouthVotersFor2020 တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Previous Previous post: အင်းစိန်မှာ ပိုးတွေ့လူနာ သေဆုံးသူ (၄၅) ဦး ရှိ
Next Next post: PUBG MOBILE Myanmar မှ Creator Challenge ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်